Kim Jong-un oo ku baaqay in "la difaaco" ammaanka dalkiisa - BBC News Somali
Kim Jong-un oo ku baaqay in "la difaaco" ammaanka dalkiisa
30 Disembar 2019
Hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi ayaa ku baaqay tallaabooyin "wax ku ool ah iyo la isku difaacayo " si loo xaqiijiyo "madaxbannaanida iyo amniga" dalkiisa, sida lagu sheegay warbaahinta dawladda.
Kim Jong-un ayaa hadalkan ka jeediyay kulanka hoggaamiyeyaasha xisbiga haya talada dalkaasi oo ka dhacay magaalada Pyongyang. Shirkan ayaa ah mid aan xilliyadan oo sanadka sii dhammaanayo oo kale aan dhici jirin.
Hadalkaasi ayaa ku soo beegmayo xilli walaac laga muujinayo suurtagalnimada in Kuuriyada Woqooyi ay soo afjartro wada xaajoodyadii ay kula jirtay Mareykanka ee ku saabsanaa hubkeeda niyuukleerka isla markaana ay billowdo tijaabada gantaalladeeda.
Mareykanka ayaa sheegay in tallaabo noocaasi oo kale ah ay noqon doonto wax aad looga xumaado.
Xukuumadda Pyongyang ayaa horraantii sanadkan ku hanjabtay in ay qaadi doonto "waddo cusub", haddii dhiggeeda Washington ay ku guuldarreysaato in wadahadallada niyuukleerka ay tanaasul ka sameyso ka hor dhammaadka sanadkan.
Muxuu kulankan u noqday mid lala yaabay?
Sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda Kuuriyada Woqooyi ee KCNA, madaxweyne Kim ayaa sabtidii la soo dhaafay furay shirkaasi oo socday ilaa shalay oo Axad ahayd. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in shirkaasi uu sii socon doono ilaa maanta oo Isniin ah.
Shirarka noocan oo kale ah ee xisbigan shuuciga ah ayaa ah kuwa inta badan lagu go'aamiyo arrimaha aad u muhiimka u ah, balse inta badan waxaa dhacda in mas'uuliyiinta ka qeybgalaya shirkan ay ansixiyaan siyaasadaha iyo qorsheyaasha uu soo jeediyo madaxweyne Kim oo leh amarka ugu dambeeyo.
Arrintan ayaa ku soo beegmayso iyadoo haatan aad loo sugayo khudbadda uu madaxweyne Kim jeedin doono billowga sanadka soo socda ee billaaban doono maalinta arbacada ah ee soo socota. Khudbadaha uu jeediyo xilliyadaasi ayaa inta badan wuxuu ku shaacin jiray arrimaha la xiriira wada xaajoodyada ku saabsan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caaggan hubka niyuukleerka.
Kim ayaa shalay sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin wax ku ool ah oo la isku difaacayo si loo xaqiijiyo madaxbannaanida iyo ammaanka Kuuriyada Woqooyi oo ah mid waafaqsan xaaladda haatan jirta.
Madaxweyne Kim ma uusan faafaahin waxa ay noqon karaan tallaabooyinkaasi.
Muxuu yahay mowqifka Mareykanka ee ku aadan wadahadalladaasi?
Shalay oo Axad ahayd ayaa wax yar uun ka hor inta uusan Kim hadalkan jeedin waxa uu la taliyaha arrimaha ammaanka ee Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo Robert O'Brien sheegay in Mareykanka uu hayo dhawr qorshe oo ay tahay in uu kaga jawaabo tijaabooyinka hubka ee Kuuriyada Woqooyi.
Robert O'Brien ayaa warbaahinta ABC u sheegay:"hadda dib ayaan u dhigayaa go'aankayaga balse Mareykanku wuxuu qaadi doonaa tallaabooyin la mid ah kuwii aan qaadi jirnay xilliyadan oo kale."
"Haddii Kim Jong-un uu qaado tallaabadaasi, dabcan aad baan uga xumaan doonaa, waana muujin doonaa sida aan uga xunnahay arrintaasi."
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa maanta lagu wadaa in uu ka arrinsado hindisaha waddamada Ruushka iyo Shiinaha ee Kuuriyada Woqooyi looga qaadayo qaar ka mid ah xayiraadaha saaran si loo dejiyo xaaladda cakiran ee haatan taagan.
Xukuumadda Washington ayaa horraan diiday in Kuuriyada woqooyi ay ka khafiifiso xayiraadaha saakan.
Laba usbuuc ka hor ayaa ergayga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Woqooyi wuxuu ugu baaqay madaxweyne Kim in uu dib u billaabo wadahadalladii u dhaxeeyay labada dhinac.
Lahaanshaha sawirka KCNA VIA REUTERS
Sidee bey xaaladda halkaa ku soo gaartay?
Madaxweyne Kim iyo dhiggiisa Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay kulmay bishii Juun ee sanadkii 2018. Sidoo kale Vietnam ayay ku kulmeen bishii Febraayo ee sanadkan, si ay uga wadahadlaan arrimaha niyuukleerka Pyongyang.
Labadani hoggaamiye ayaa sidoo kale bishii Juun ee sanadkan ku kulmay aagga milatariga ka caaggan ee u dhaxeeya waddaamda Kuuriyada Woqooyi iyo tan Koonfureed.
Balse xiriirka u dhaxeeya labada dhinac ayaa bilihii u dambeeyay sii xumaanayay.
Kuuriyada Woqooyi ayaa mar kale billowday in ay tijaabiso gantaalladeeda riddada gaaban. Mana jirin camdaareyn ay arrintaasi kala kulantay si la mid ah markii ay tijaabisay gantaalladeeda riddada dheer.
Xukuumadda Pyongyang ayaa Washington u qabatay ilaa dhammaadka sanadkan in ay uga khafiifiso xayiraadaha saaran.
Laba maalmood ka hor ayay ahady markii ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhig ku yaalla Kuuriyada Koonfureed ay kala carareen ka dib markii ay maqleen seeriga deg degga ah ee dagaalka.
Ciidamada ayaa u maleeyay in Kuuriyada Waqooyi ay weerar ku soo qaaday sidaa awgeedna kala cararay.
Afhayeen u hadlay militariga ayaa arrintaan ku tilmaamay "Khalad aadane ka dhacay" oo ka dhacay saldhigga Camp Casey, kaas oo si aad ah ugu dhow xuduudda labada Kuuriya.